I-WestJet ibiza i-VP yesiGqeba esiLawulayo kunye neGosa eliyiNtloko lokunyaniseka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-WestJet ibiza i-VP yesiGqeba esiLawulayo kunye neGosa eliyiNtloko lokunyaniseka
U-Schuster uneminyaka engaphezu kwe-19 yamava okuthembeka, kubandakanywa iminyaka emithandathu njengeGosa eliyiNtloko yeSigqeba (i-CEO) ye-Velocity Frequent Flyer, inkqubo yokunyaniseka yeVirgin Australia.
I-WestJet namhlanje ibhengeze ukuqeshwa kukaKarl Schuster, njengeSekela likaMongameli we-Airline kunye neGosa eliyiNtloko lokunyaniseka (CLO). U-Schuster uza kujoyina iqela lobunkokeli be-WestJet ekuqaleni kuka-2022, emva kokugqitywa kwenkqubo yokufudukela kwelinye ilizwe.
U-Schuster uneminyaka engaphezu kwe-19 yamava okuthembeka, kubandakanywa iminyaka emithandathu njengeGosa eliLawulayo eliyiNtloko (i-CEO) ye-Velocity Frequent Flyer, inkqubo yokunyaniseka yeVirgin Australia. Ngexesha lakhe Virgin Australia, Schuster wakhula Velocity ukuba enye yeenkqubo ezinkulu ukunyaniseka Australia, kakhulu ukwandisa ingeniso yabo yonyaka; ukwandisa ababhalisi bamalungu ukuya kwi-10 lezigidi, ukusuka kumalungu abo angaphambili azizigidi ezi-5.3; kunye nokukhula kobudlelwane kunye neempawu eziphawulekayo kwilizwe lonke. Ngaphambi kwexesha lakhe kwiVelocity, uSchuster ukhokela iinkqubo zokuthembeka zeminyaka emininzi kwiQantas, British Airwaykunye Malaysia Airlines kwaye unike iingcebiso zokucebisa kuluhlu olwahlukeneyo lweenqwelomoya kwiminyaka yakhe ephantse ibeli-15 e-Aimia Inc.
"UKarl unembali echukumisayo yokuqhubela phambili ukukhula okubonakalayo kwiinkqubo ezahlukeneyo zokuthembeka kunye nokuzisa iziphumo ngokuqamba izinto ezintsha kunye nesicwangciso," utshilo uHarry Taylor, I-WestJet UMongameli wethutyana kunye ne-CEO. “Sijonge phambili ekwamkeleni uKarl kwiWestJet; ububanzi bamava akhe buya kuphakamisa inkqubo yokunyaniseka yeWestJet iye kwinqanaba eliphezulu.”
I-CLO yindima esanda kwenziwa yenkampani yeenqwelomoya, enoxanduva lokwenziwa kokukhula I-WestJetInkqubo yokunyaniseka, iimveliso, iinkonzo kunye nentsebenziswano ngokusungula izinto ezintsha kunye nobunkokeli.
"Njengaye I-WestJet utshintsho ukusuka ekubuyiselweni ukuya ekwandiseni, inkampani yeenqwelomoya yenza utyalo-mali olubalulekileyo kwinkqubo yayo yokuthembeka esele iphumelele, kwaye ndichulumancile ukuba kunye neqela ngeli xesha libaluleke kangaka," utshilo uSchuster. “Njengoko i-WestJet ibuyela umva yomelele, kukho indlela yeenqwelo-moya engakholelekiyo phambi kwe-WestJet Mvuzo kwaye siza kube sisebenzela ukuzisa iindwendwe ezininzi izibonelelo kunye namalungelo ngokuphucula ukunyaniseka okuvuyisayo kunye nokuhlaziya. Kuyandivuyisa ukujoyina iqela le-WestJet eliqhuba kakuhle ngokuthembeka ecaleni kuka-d'Arcy Monaghan, uSekela Mongameli we-WestJet, iiNkqubo zoNyaniseko kwaye ndijonge phambili ekusebenzeni naye kunye neqela ukuyisa inkqubo yethu kwinqanaba eliphezulu. "
Novemba 30, 2021 kwi-08: 08
NjengoMongameli kunye neGosa eliLawulayo eliyiNtloko, wongamela isicwangciso se-airline, kunye neSekela likaMongameli oPhezulu kunye neGosa eliyiNtloko leNtengiso. IBlog elunge kakhulu ndikonwabele ukuyifunda Nceda wabelane ngoLwazi oluninzi olufanele ukuyifunda. Ndwendwela iNkampani yoPhuhliso lwe-Mobile App.